Right to information – Free Expression Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံသည် နယ်ပယ်စုံတွင်ပျံ့နှံ့နေသော တရားဝင်လျှို့ဝှက်ချက်ယဉ်ကျေး မှုအား စွဲကိုင်ထားသည်။ မူဝါဒနှင့် ဘတ်ဂျက်များကဲ့သို့သော အများပြည်သူအ ကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အစိုးရက ယခုအ ချိန်ထိ တောင်းခံရခြင်းမရှိဘဲ လိုလိုလားလား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါ။ RTI ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်း အများအားဖြင့်ဆက်သွယ်၍မရနိုင်ပါ။ ဆက်သွယ်၍ရပြန်သည့် အခါတွင်လည်း ၄င်းတို့သည် RTI ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို မသိရှိခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ၏ တောင်းဆိုမှုများကို မလေးမစားဆက်ဆံတတ်ကြသည်။ ၄င်းတို့၏လျှို့ဝှက်ချက် ကို ကာကွယ်ခြင်းသည် တန်ပြန်သဘောအရ ၄င်းတို့အား အများပြည်သူမှ တာဝန်ခံစေခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်အထောက်ကူပြုသည်။ SDG ပန်းတိုင်များအား အကောင်အထည်ဖော်နေမှုကို နိုင်ငံအဆင့်ဆန္ဒအ လျောက် သုံးသပ်တင်ပြသည့် ၂၀၂၁ခုနှစ် လုပ်ငန်းစဉ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အနေ ဖြင့်
Jul 26, 2021 by Coordinator in Publications ထုတ်ဝေစာများ
Illegitimate internet shutdown extended beyond elections — ဥပဒေနှင့်ဆန်ကျင်သည့် အင်တာနက်ဖြစ်တောက်မှုအား ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလသို့ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးသည့်အပေါ် ပူးတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဖိုရမ်၏ ပူးပေါင်းစီစဉ်သူ အဖွဲ့(၄)ဖွဲ့ဖြစ်သည့် လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း-မြန်မာ(FEM)၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြု ဌာန(MCRB) ၊ “မြန်” အိုင်စီတီ(MIDO) နှင့် ဖန်တီးရာ(Phandeeyar) တို့သည် ရွေးကောက်ပွဲ အလွန်ကာလအထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအား သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများသို့ အမိန့်ပေးခဲ့သော အစိုးရ၏ နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားသည့် အမိန့်ညွှန်ကြားစာအပေါ် များစွာ စိုးရိမ်မိပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် 3G၊ 4G အင်တာနက်များ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖွင့်ပေးရေးနှင့် နောက်ထပ် ကွန်ရက်ဖြတ်တောက်နှောက်ယှက်မှုများ ပြဌာန်းချမှတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ပေးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။ မြန်မာ့ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးထောက်ပံ့သူများ ဖြစ်ကြသည့် MPT၊ Mytel၊
Nov 04, 2020 by Coordinator in News သတင်း
အစိုးရသည် ၂၀၁၅ မှစ၍ သတင်းအချက် အလက်အခွင့်အရေးကို အားတက်သရော ထိန်းချုပ်၊ ကန့်သတ်၊ ပိတ်ပင်၍ရသည့် ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဌာန်းသတ်မှတ်လာသည်။ အစိုးရသည် ရုပ်သံနှင့် ရေဒီယိုလိုင်းအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ခြင်း 1၊ မီဒီယာများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာမလှုပ်ရှားနိုင်အောင် (သို့မဟုတ်) အများပြည်သူဆိုင်ရာ အင်စတီကျူးရှင်းများထံ လက်လှမ်းမမီအောင် ပိတ်ပင်ထားခြင်း၊ အင်တာနက်ကို ခြေခြေမြစ်မြစ် မဟုတ်ဘဲ စိတ်ထင်တိုင်းပိတ်ခြင်း2နှင့် သတင်းဝက်(ဘ်)ဆိုက်များကို ပိတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နေ သည်။4အချိန်အတန်ကြာကတည်းက ကတိပေးထားသည့် သတင်းအချက်အခွင့်အရေးဥပဒေကြမ်းမှာ လည်း ၂၀၁၅ နောက်ပိုင်းတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသည့် သောင်မတင်ရေမကျအခြေအနေ၌ ငြိမ်သက် နေသည်။ ထိုချိန်တွင် ရိုက်တာသတင်းထောက်များကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့ရာ5 ထိုဥပဒေအစား အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်
Sep 28, 2020 by Coordinator in News သတင်း
နှေးကွေးပြီး လုံခြုံမှုမရှိသော 2G ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှုသည် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ချိတ်ဆက်မှုများ အား 3G (သို့) 4G တို့ကဲ့သို့ မပံ့ပိုးပေးနိုင်သောကြောင့် ရခိုင်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် အလွန်ဆိုးရွားသော အင်တာနက်ပိတ်ဆို့မှုများ ဆက်လက်တည် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် 3G နှင့် 4G ကွန်ရက်များအား ပြန်လည်ဖွင့်ပေးပြီး ကွန်ရက်နှောင့်ယှက်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းများမှ ရှောင်ကြဉ်ပေးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့က တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ မှတ်တမ်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုသည် ကမ္ဘာ့အကြာရှည်ဆုံးသော ဖြတ်တောက်မှု တစ်ခုဖြစ်လာကာ ယခုအခါတွင်လည်း 2G ဖြင့် ကွန်ရက်ပိတ်ဆို့မှုများ ရှိနေသေးသည်။ 2G တွင် အများ ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆန္ဒမဲသတင်းများ
Sep 01, 2020 by Coordinator in News သတင်း
Internet shutdown will increase risk of Covid-19 outbreak in Rakhine and Chin — ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့၌ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားမှုသည် ၄င်းဒေသများတွင် Covid-19 ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်ကို အရှိန်မြှင့်တက်စေသည်
ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ရခိုင်နှင့်ချင်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်၌ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားမှုသည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ကို ခုခံတိုက်ခိုက်ရာတွင် ပြည်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေသည်။ မကြာသေးမီအချိန်က အစိုးရမှ 2G အင်တာနက်ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း ၄င်း 2G သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်သုံးဆယ်က အသုံးပြုခဲ့သည့် နည်းပညာသာဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် နှေးကွေးလွန်းလှသည်။ ၄င်း အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရသည့်ဒေသတွင် နေထိုင်သူပေါင်း (၁.၄) သန်းဝန်းကျင်ရှိပြီး ၄င်းတို့သည် အဆိုပါ ကပ်ရောဂါဆိုးနှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမှီနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် ၄င်းတို့နှင့် ၄င်းတို့၏
Aug 22, 2020 by Coordinator in News သတင်း
If adopted, the Myanmar government’s new Bill would significantly undermine the right to information (RTI) in one of the world’s most secretive countries. FEM urges the government and parliament to substantively revise the Bill in accordance with international democratic standards. The Ministry of Planning and
Jul 18, 2019 by Coordinator in Bills
A new parliamentary committee tasked with reviewing Myanmar’s constitution is an opportunity for the government to guarantee the democratic rights to free expression, media freedom, and access to information. We welcome the government’s creation of the Constitutional Amendment Committee, established to review and propose amendments
Apr 11, 2019 by Coordinator in Campaigns စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး
3rd Digital Rights Forum calls for better regulated, freer, safer online space — ဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် အများပြည်သူ သဘောထားများကို အလေးထားရယူ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဥပဒေများနှင့် နည်းပညာပတ်ဝန်းကျင်ကို အမှန်တကယ်လွတ်လပ်၍ လုံခြုံသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ရမည်ဟူသော တောင်းဆိုချက်များဖြင့် တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ဒီဂျစ်တယ် အခွင့်အရေးဖိုရမ်အား အဆုံးသတ်
The third Myanmar Digital Rights Forum concluded on 19 January in Yangon withacall for new policy and regulation that would safeguard digital rights in Myanmar, andafully consultative process to achieve this. Participants welcomed the government’s announcement of its plans for open
Jan 22, 2019 by Manager in News သတင်း